वास्तविक साम्यवादी वीपी कि प्रचण्ड ? :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२४ असार २०७७, बुधबार ११:२६ English
रोल्पामा समेत असफल भएको कम्युनको नयाँ ढाँचा ल्याउन माओवादीले आफ्नो सातौँ महाधिवेशनमा उत्पादन र निर्माण ब्रिगेड बनाउने घोषणा गरयो । यो ब्रिगेडले देशमा उत्पादन र उद्योग तथा निर्माणका लागि काम गर्ने हो भनिएको तर यसले त्यसो गर्ने हो कि देशभर नै सङ्गठन बनाएर सरकारी पैसा आफ्नो सरकार आएमा वा रहेमा मिलेर र अरूको सरकार भएमा धम्क्याएर कार्यकर्तालाई खुवाउने बाटो खोजिएको हो भविष्यले नै देखाउनेछ । यसो नभए अवश्य पनि यो जनता भ्रमबाट मुक्त भए पनि कार्यकर्तालाई अझै भ्रम पार्न गरिएको योजना हो । माओवादीले गठन गरेका कथित कम्युनहरू धाराशयी हुँदै अन्त्य भएको र सम्भवतः दुईवटा मात्र मुस्किलले चलेको र नेताहरूले बेवास्ता गरेको अवस्थामा कम्युनवादी यो नयाँ धारणा कागजमा मात्र उपयुक्त हुने उनीहरूकै व्यवहारले देखाएका छन् । सत्तामा नपुगेसम्म मात्र माओवादी नेताहरू कम्युनमा बस्ने हुन् र सत्तामा पुगेपछि त्यो कम्युन गनाउँछ र करोडौँ पर्ने आलिशान भवनहरू र चौरासी ब्यन्जन नै चाहिन्छन् भन्ने उनीहरूले देखाएका छन् । कम्युनहरू त जनतालाई देखाएर सत्तामा जानुभन्दा पहिला मूर्ख बनाउने माध्यम हुन् भन्ने विगतले देखाएको छ ।
यो फर्मुला चीनमा माओको समयमा लगाइएको थियो । सबै भ्रष्ट कम्युनिस्टहरूले गर्दा र यसमा रहेको स्वाभाविक कमजोरीले यो परिपाटी घृणित भयो र चकनाचुर भएर अन्त्य भयो । किसान र मजदुरलाई पीडा दिएर र किसान र मजदुरलाई काम गर्न भने लगाउने तर माम भने कम्युनिस्ट बलिया बाङ्गा र बाठाहरूले नै खाने भएकोले करिब पाँच करोड चिनियाँ त्यस समयमा मरेको अनुमान छ । यो त्यतिबेला अर्थात् सन् १९५८ पछिको दशकको जनसङ्ख्याको हिसाबले करिब देशको जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यही कार्य स्टालिनले लेनिनको मृत्युपछि १९३० को दशकमा केही फरक किसिमले गरेका थिए । पहिला उनले कम्युनको माध्यमद्वारा उत्पादनमा जोड दिए । त्यो सफल भएन र धेरै मानिस खान नपाएर मरे । त्यसपछि सम्पत्तिको जिम्मा किसानलाई दिने तर निश्चित हिस्सा सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि उत्पादन बढी भयो । तर, कामचोर र उत्पादन लुकाएको भनेर किसान र मजदुरलाई यातना दिइदिई कम्युनिस्ट तिघ्रेहरूले मारेका थिए । केही खान नपाएर मरेका थिए । सरकारले किसान र मजदुरबाट सस्तोमा किन्ने र त्यही सामान पछि उनीहरूलाई बेच्दा २० गुनासम्म बढी मूल्य लिने गरेको अवस्था थियो । त्यो समयमा पनि रुसमा करिब १० प्रतिशत किसान र मजदुर मरेका थिए ।
सत्तामा पुग्न भ¥याङको रूपमा प्रयोग भएका किसान–मजदुर कम्युनिस्टहरूका लागि सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिला राम्रोसँग हात मिलाउन योग्य सहयोद्धाहरू थिए भने सत्तामा पुगेपछि उनीहरू कम्युनिस्टहरूका दास बन्न पुगे । स्टालिनकी छोरी श्वेतलानाले कलेज पढ्दा आफ्नी गरिब किसानपुत्री साथीलाई आफ्नो कारमा लगेको स्टालिनले थाहा पाएपछि साथीलाई छोड्नुपरेको थियो । पछि उनले कम्युनिस्ट नेता तथा श्वेतलानाका पिता स्टालिनको विरोध गर्दा देश नै छोड्नुपरेको थियो ।
रुसमा अहिले पनि भ्रम चिर्न नसकिएकाले केही मानिसमा स्टालिनले हिटलरलाई हराएको भ्रम छ । यो मिथ्या हुनु एक अर्थमा स्वाभाविक पनि हो । किनभने कम्युनिस्टहरूले आफ्ना विपक्षका प्रमाणहरू नास गरेका हुन्छन् र आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न मिल्ने झुटा कुराहरू राखेका हुन्छन् । वास्तवमा हिटलर र स्टालिन मिलेर जर्मनीभन्दा पश्चिममा हिटलरले उपनिवेश चलाउने र स्टालिनले विरोध नगर्ने जमनीदेखि पूर्वमा स्टालिनले कम्युनिस्ट उपनिवेश चलाउने योजनाअनुसार द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो । तर, हिटलरले बेइमान गरेर पूर्वमा पनि हमला गरेपछि मात्र स्टालिनले हिटलरको विरोध गरेका थिए र हिटलरको विरुद्धमा लडेका थिए । रुसी कम्युनिस्टहरूले चौधवटा राष्ट्रलाई कागजमा स्वेच्छिक युनियन बनाएर व्यवहारमा जबर्जस्ती रुसमा गाभेका थिए । पछि उनीहरूले स्वतन्त्रता लिए । जबर्जजस्ती नभएको भए कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदासम्म बोल्न नसक्नेहरू त्यो व्यवस्था अन्त्य भएपछि किन अलग भए ? यसको उत्तर कम्युनिस्टहरूसँग छैन । यद्यपि लोकतन्त्रको स्थापनापछि सोभियत सङ्घ एक हुन सकेको भए विश्वले धेरै सकारात्मक कुरा पनि पाउने थियो । त्यस्तै, लेनिनले जर्मन शासक हिटलरबाट पहिला भत्ता लिने गरेका तथ्यहरू पनि बारम्बार उल्लेख गरिन्छन् ।
के कम्युनिस्टको राष्ट्रवाद भनेको ठूलाले जे भन्यो सानाले त्यही मान्नु र ठूलाको अधीन स्वीकार गर्नु हो ? चीनको पनि कम्युनिस्ट भियतनामसमेतसँग सीमा–विवाद छ । यद्यपि चीन–नेपालको सम्बन्धमा जहिले पनि असल मित्र रहिआएको छ । विश्व नै एउटा समाज हो पनि भन्ने, सर्वहारा विश्वभरकै एक हुन् पनि भन्ने र ठूलो देशको सर्वहारा (?) ले साना देशका सर्वहारालाई जे पनि गर्न हुने ?
प्रचण्डले नेपालसमेत मिलाएर दक्षिण एसियायी सोभियत बनाउने योजना उनको हिंसात्मक समयमा उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि हिंसा सकिनासाथ जातीय राज्यको कल्पना गरेर जातिका बीच झगडा गराएर किस्तामा विदेशलाई देश बुझाउने भाका बोल्न थाले । अहिले आएर माओवादीले हेटौँडाको सातौँ महाधिवेशनसमेतमा सुगौलीको सन्धि र देशका सीमा–विवाद जनमतबाट मिलाउने भन्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुरामले यसको प्रशंसा गरेका छन् । यो कित्ता–कित्तामा होइन एकमुष्ट नै विदेशलाई बुझाउने नीति हो । नेहरूले भारतको सिमाना हिमालय हो भन्दा बीपीले विरोध गरेका थिए । अब त हिमालसम्म भारत हो कि होइन भनेर विवाद आएकाले जनमत गर्नुपर्छ भन्न पनि माओवादी तयार भएको देखियो । प्रस्ट नै छ, भारत र नेपाललाई एकै मतदानको हैसियतमा राखेर मतदान हुने हो भने नेपालको अस्तित्व रहँदैन । तर, हामी अहिले पनि वाल्ल परेर माओवादीहरूको कार्यको तमासा हेरिरहेका छौँ । यो माओवादीको कस्तो राष्ट्रवाद हो ? कम्युनिस्टहरूमा पनि कोही राष्ट्रवादी हुँदा रहेछन्, यसको विरोध गर्नेमध्ये वैद्य पक्षहरू पनि धन्यवादका पात्र छन् ।
सरकारमा नपुग्दासम्मको कालापानी, सुस्ता, १९५० को असमान सन्धि तथा सुगौलीको सन्धिसमेतका सम्बन्धमा नाराबाजी गर्ने र मित्रराष्ट्रलाई गाली गरेकोजस्तो गर्ने माओवादीले अहिले सीमा सम्बन्धमा जनमत गर्ने कुरा गरिसकेकाले पहिला भनिएका कुराहरू चुनावी नारा मात्र रहेछन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । अब भारतका एक अर्ब तीस करोड र नेपालका अढाई करोड जनताको जनमतसङ्ग्रहले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने माओवादी मनसुवा हो भने उनीहरूका नेतालाई सानो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ठूलो देशको मुख्यमन्त्री हुनै ठीक लागेको छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ ।
चुनाव जित्नका लागि विभिन्न चर्का नारा लगाउने र चुनाव जितेपछि सत्तामा बस्न विरोध गरिएकाहरूको समर्थन गरेपछि नै सजिलो हुँदा उनीहरूको ताबेदारी गर्ने कार्य भएको छ । राष्ट्रियताको नारालाई उल्टाएर सत्तासँग साट्ने कार्य गर्दा हामीहरूको हैसियतलाई उनीहरूले के गरेका छन् भन्ने प्रस्ट हुँदैन र ? अग्रगमनको पक्षधर एक मात्र दल एनेकपा माओवादी मात्र हो र अरूले क्रान्तिलाई धोका दिएका छन् भन्ने उनीहरूको अग्रगमन अहिलेसम्म जनताले पीडाको माध्यम रहेछ भनेर देखेकै छन् । राष्ट्रियता बलियो बन्दुक देखाएर जनतालाई तर्साउँदै सत्तामा जानेहरूबाट हुँदैन । यो त जनतालाई सजग, सक्रिय, चेतनशील, विकसित, क्षमतावान बनाएर मात्र हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ, तर यसमा सङ्गठित हुन सकेका छैनौँ ।
लेनिनले देशमा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी एक मात्र हुने बताएका हुँदा नेपालमा पनि एउटा मात्र सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड र बाबुरामहरूको माओवादी नै हो भन्ने हो भने चित्रबहादुरहरू, ओलीहरू, झलनाथ तथा वैद्यहरूले पनि जनतालाई उत्तर दिनैपर्छ कि वास्तवमा जोसँग बन्दुकको प्रयोग गर्ने कला बढी छ र बन्दुक बढी छन् उनीहरू नै वास्तविक साम्यवादी हुन् कि होइनन् ? माओवादी साम्यवादी हुन् भने उनीहरू आफूचाहिँ के हुन् ?
के हामी नेपाली जनता पढेकाहरू पनि यो अवस्थाबाट चेत्नुपर्दैन ? कम्युनिस्ट विचारमा लोभले लाग्नेहरू र भ्रमले लाग्नेहरू तथा त्रासले लाग्नेहरू लागेकै होलान् । तर, यो सबै बुझ्नेहरूले यो विचारको माध्यम रहेको भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको मोह त्याग्नुपर्ने होइन र ? बहुलवादको माध्यमबाटै साम्यवाद आउन सक्दछ, त्यो विकासबाट आउन सक्दछ र त्यसका लागि पहिलो आधार जनजीविकाको ग्यारेन्टी र विकासको फ्युजन भएको सम्झने बीपीहरू साम्यवादी कि बन्दुक बोकेर जनतालाई साम्यवाद जिन्दावाद भन्न लगाउनेहरू साम्यवादी ? साम्यवाद त गल्ती गर्नेहरूलाई सजिलैसँग हटाएर राम्रो गर्नेहरूलाई ल्याउन पाउने जनताको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने बीपीको सोच हो । यो सोच र व्यवहार पुँजीवादी हुन्छ भने नारा नै साम्यवादको मूलमन्त्र हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ ।
१६ फाल्गुन २०६९, बुधबार १८:४४ मा प्रकाशित